EYDA TARANKA: XIRITAANKA - EEYAHA
Eyda Taranka: Xiritaanka
Eeyaha labka ah waxay bilaabi karaan inay yeeshaan shahwada markay jiraan toddobada bilood, laakiin toban bilood ayaa ugu badan. Eeyaha yaryari ma laha manida tayada leh. Ku dhowaad dhammaan eeyaha waxay yeelan doonaan shahwada hal sano.
Eeyaha haraaga ah waxay ku jiraan cimrigooda inta u dhexeysa 18 bilood ilaa 4 sano jir (ama 5), ​​intaas ka dib, tayada shahwada waxay bilaabmaysaa inay yaraato, iyo awoodda ay ku dhex gasho ukunta, way yaraanaysaa. Markay 10 jirsadaan, eeyaha haragga badankood ma soo saaraan shahwada uur yeela doonta.
bulldog american / feer isku dhafan
Xinjirowgu waa dhacdo dabiici ah ee taranka eyga kaas oo qanjirka 'bulbus glandis' ee guska labku uu ku bararo gudaha xubinta taranka dumarka. Eeyadu waxay si isku mid ah u wada xiran yihiin 15-20 daqiiqadood (laba illaa 30 daqiiqo sidoo kale waa caadi), inta lagu jiro waqtiga dheecaanka ayaa dhacay. Shahwada ayaa la siidaayaa bilowga xariga, inta lagu guda jiro qoob ka ciyaarka cagaha (eeg hoos). Inta lagu gudajiro kulanka, wuxuu sii deynayaa dheecaanka qanjirka 'prostatic'.
Isla marka eeyaha ay xidhaan labku sida caadiga ah lugtiisa ayuu gadaal uga dhaqaajiyaa, badhida ayuu u rogaa badhida waana sii xirayaan. Ku xidhan.
Isku dhejinta waa caadi. HA baraf dhigin si aad u kala maqnaatid. Labku waa inuu bararaa oo uu ku dhegmaa gudaha dheddigga laba illaa 30 daqiiqo. Waqtigan hadaad dareento sariirta iyo biyo xireenka aaggan waxaad dareemi doontaa garaaca. Markaad maqasho qof dhahayo wuxuu helay 13-daqiiqo oo xiriir ah, tani waxay ka dhigan tahay inay wada xirnaayeen 13 daqiiqo.
Sawirka guska lab oo leh qanjidhada bulbus bararsan
Waxaa lagugula talinayaa inaad kormeer dhow siiso oo aad isdajiso. Uma baahnid haween weyn oo cabsi leh oo argagax leh si ay ninka ugu wareejiso guskiisa, maadaama ay nabar yeelaneyso oo laga yaabo inay dib u soo noqnoqoto taranka. HA isku dayin inaad kala tagto. Taa baddalkeeda, FUULO SAGXAADA oo isdaji. Uma baahnid haweeneydu inay argagaxdo oo ay biloqdo xoqitaan. Haddii ay ka weyn tahay ragga runti way dhaawici kartaa ninka. Isagu ma awoodo oo wuxuu caadi ahaan istaagi doonaa si qumman, sugaya. Labku caadi ahaan si deggan buu u istaagaa si loo hubiyo in haweeneydu ay sidaas oo kale sameyso. Haweenka qaarkood ayaa u ooya wax u eg xanuun, qaar si ba'an u doonaya inay xorriyad helaan, qaar baa si deggan u sugaya.
Xadhig ka dib, way fiicantahay in biyo-xidheenka loo dayn waayo 15 daqiiqadood, laakiin MUHIIMKA ugu muhiimsani waa in la hubiyo ninkaaga, oo la hubiyo in guskiisu dib ugu noqday gudaha oo aanu timo ku ceejin ama ku dhegin.
brittany spaniel iskudhafka dhadhanka dahabiga ah
Waxaan kaliya xiriiray breed cusub oo doonayay inuu daawado. Naxdinteeda ugu weyni waxay ahayd argagax bilowgii biyo-xidheenka oo iyada welwel gelin lahaa. Laakiin markii ay aragtay aniga oo sagxadda tagaya oo aan dejinayo ka dibna ay garwaaqsatay in ay taasi caadi tahay maadaama aan aad u deggan ahay, WAY SOOOOOOO way ku faraxsan tahay inay aragto sida ay tahay si ayan u argagaxin, sida inay argagaxsan tahay, eeyadu sidoo kale cabsi.'
Eeyaha badankood waxay u taagan yihiin xarig waana muhiim inaadan u oggolaan in biyo xireenka uu rogrogo ama uu aad u jajabo oo uu dhaawaco ragga, laakiin biyo xireenka gaarka ah wuxuu ku adkeysanayaa inuu dhabarka u jiifo.
Ilaa aad ka ogaatid waxa lammaanahaagu samayn doonaan markay xidhan yihiin, waxaan si weyn u soo jeedinayaa 100% kormeer marka la isku tolayo. Kaliya waxaan sameeyaa xiriiro kormeer ah .... kormeer 100% .... Shilalka way dhici karaan.
Xiriirka ka dib way kala maqan yihiin, diidmadooda weyn, ugu yaraan 24 saacadood si ay u oggolaadaan shahwadiisa inay dib u soo laabato.
Ragga da 'yar (ka yar afar sano) 20 saacadood ayaa ku filan, laakiin labka weyn, waxaad u baahan kartaa inaad waqtigaan ku kordhiso 30-36 saacadood.
toy Eskimo Maraykan weynaado
Way fiicantahay inaad iska hubiso dhakhtarkaaga xoolaha. Wuxuu ka soo qaadan karaa muunad labka oo fiirin karaa sida uu u bacrin yahay ama haddii uu nadiif yahay.
Haddii heerkiisa shahwaddu hooseeyo, markaa waa inaad xoogaa aad uga qayb gasho jadwalka noocyada.
Biyo xireen isku dhafan wax ka badan hal daaqin hal kuleyl ma yeelan karaa nacasyo ka socda labada aabbe?
Jawaab: Haa, markii ay biyo-xidheen isku darsadaan in ka badan hal dhudhun, labada isleegba way uur qaadi karaan haweeneyda isku mar. Pups ka soo jeeda hal qashin ayaa yeelan kara aabayaal kala duwan, maadaama shahwada labada aabbo ay dhex dabaalan doonaan, iyagoo sugaya ukunta inay bislaan. Shahwada labka aabbo waxay ku noolaan doontaa biyo xidheenka shan maalmood.
Purebred Yorkshire Terrier iyo Chorkie (iskuxirka Yorkshire Terrier / Chihuahua) oo ku dhashay isla qashin
HAA, waa dheddigga go'aamin doonta cabbirka qashinka.
HAA, eeyga haraaga ah ayaa go'aaminaya jinsiga eey yaryar.
Qashinkan waa natiijada qalad markii a Chihuahua lab qabtay a Yorkie dhadig bilowga kuleylkeeda. The Yorkie lab iyada sidoo kale isagana wuu la wadaagay. Isla qashinka waxaan ku leenahay a Chorkie dhedig iyo mid saafi ah oo Yorkie ah! Cute! Sawirka waa sideed toddobaad. '
Waxaa iska leh Wilkinsons Dream Kennel, Spain
shih tzu terrier mix sawiro
SUNTZU shih qasan frize bichon
sawirada oo deenish ah buluug weyn